Black Magic: Hosting & Domain
Posted by Black Magic | Posted in ဗဟုသုတများ | Posted on 9:55 PM
ဒီနေ့တော့ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပိုက်ပိုက်လေးနဲ့ Domain လေးဝယ်မယ်လို့ ပြောပလိုက်တယ်ဗျာ..၊ Hosting လည်းဝယ်ချင်တယ်..၊ ဒါပေမယ့် အဲလောက် ပိုက်ပိုက်ရှိသေးဘူး..၊ :)
Domain အကြောင်းပြောမှ..၊ တချို့က Domain နဲ့ Hosting ကို သိပ်မကွဲဘူးဆိုတာ သတိရတယ်....၊
ကဲ..စလိုက်ကြစို့ ဗျာ။ တကယ်တော့ website တစ်ခုအတွက်ရှင်းပြဖို့ကတော့အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့အနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အဓိကသိသင့်သိထိုက်တာလေး တွေကို ပဲရှင်းပြပေးမှာ်ပါ။ အရင်ဆုံး Website ဆိုတာ
Website = Domain Name + Hosting
အဲဒီ equation လေးအတိုင်းပါပဲ။ Website တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ အတွက်ကို Domain Name ဆိုတာ နဲ့ Hosting ဆိုတာနှစ်ခုပဲအဓိကလိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ …ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ လားလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ပါဗျာ။အဲဒီအပိုင်းနှစ်ခုကိုအဓိကအားဖြင့်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်း မယ်ဗျာ။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ က website တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့website လိပ်စာလိုအပ်လာပါပြီ။ ဥပမာ….အိမ်လိပ်စာသိတော့မှအဲဒီအိမ်ကိုစာပို့ တာတို့ ဆက်သွယ် တာတို့ လိုမျိုးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ အိမ်လိပ်စာနဲ့ တူတဲ့ Domain ဆိုတာကလည်းကျွန်တော် တို့ လုပ်မယ့် website အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။
Domain Name ကိုကျွန်တော်တို့ က http://www.xxxx.xxx ( အဲဒီမှာ www ဆိုတာကတော့ online မှာ သုံးမယ့် web service computer လို့ ရည်ညွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ နောက် xxxx ကတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အမည် (သို့ ) လုပ်ငန်းအမည် ပေါ့လေ…အဲဒါကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး xxx ကတော့ *.com = company အတွက်လား *.org=အဖွဲ့ အစည်းအတွက်တစ်ခုခုလား (သို့ ) အခြားသော extension တွေရှိပါတယ်။ ) ကဲ..ဟုတ်ပြီးနော်…အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ့်လုပ်ငန်းနာမည်နဲ့website လုပ်ဖို့ အတွက် Domain Register ဆိုတာလုပ်ပေးရပါတယ်။
များသောအားဖြင့် အခကြေးငွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုယူပြီး Domain Service Provider ( Go daddy, Name cheap, Host gator,…..) တို့ ကနေပြီးတော့ Domain Service ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Register လုပ်တာတို့အသုံးပြုခွင့်ကို ကိုယ်ဝယ်ယူတဲ့ Package အလိုက်ပေးပါတယ်။ ( ၁ နှစ်ဆိုရင် Silver Package တို့ …၂ နှစ်ဆိုရင် Gold Package တို့ လိုမျိုး) အဲဒီတော့ကိုယ်ဝယ်ယူတဲ့ Package အလိုက်ကို Domain Name ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့သက်တမ်း ( ၁ နှစ်,၂နှစ်(သို့ )….) အတွင်းအသုံးပြုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါ တယ်။
အခမဲ့ရသော Domain Name Service များလည်းရှိပေမယ့် Security ပိုင်းကတော့သိပ်စိတ်မချရပါဘူး။ Domain Name တစ်ခုရရင် ကိုယ်တိုင် Domain Control လုပ်နိုင်တဲ့ CPanel နဲ့ Admin Right ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး Company IT များသာ ဒီအပိုင်းကိုကိုင်တွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကဲ….ဒီလောက်ဆိုရင် Domain အကြောင်း ကိုအကြမ်းဖျင်းနားလည်လောက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ခုနကပြောခဲ့တာက အိမ်လိပ်စာ ( Domain) အကြောင်းနော်။ခုတစ်ခါကတော့ Hosting (သို့ ) Web Hosting အကြောင်းကိုဆက်လိုက်ကြစို့ ဗျာ။ Hosting ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Website ရဲ့Real Datas တွေကိုသိမ်းဆည်းထားရမဲ့ မြေကွက်နဲ့ အိမ်ပါပဲ။ အိမ်လိပ်စာရှိပြီး မြေကွက်နဲ့ အိမ် မရှိလို့မဖြစ်သလို Domain Name ရှိပြီး Hosting မရှိလို့ မရပါဘူး။
Hosting ပိုင်းမှာတော့ Open CMS ( Content Management System ) တွေဖြစ်တဲ့ Joomla, Drupal, WordPress, Ajax တို့ သုံးနိုင်သလို အခြားသော Web App Tools တွေနဲ့ ကိုယ့် website ကိုအလှဆင် နိုင်ပါတယ်။ အချို့ သော Domain Service တွေမှာ Domain + Hosting တစ်ခါတည်းတွဲဖက်ပါဝင်လေ့ ရှိပြီး အဲလိုမျိုးဝယ်တာကတော့စိတ်ချရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ Hosting ဆိုတာ Website ရဲ့ Database ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ မပါပဲနဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘုး။
ကဲ…ဒီပုံလေးကတော့ ခုနကပြောတဲ့ Equation လေးကို သရုပ်ဖော်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
website ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံ
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Database Driven Website တွေအကြောင်းကိုအကြမ်းဖျင်းနားလည် ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲလို ဆိုတော့ Database မပါဘဲနဲ့ ကော…website ဆောက်လို့ မရဘူး လား…ရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Hosting နေရာကို blog တစ်ခုခုမှာရေးပြီးတော့ Domain Name နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးအခြားသော service လေးတွေ ( Facebook add-on တို့ …Like button တို့ .) ထပ်ထည့်ပြီးလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကတော့ သတင်းသမားတွေအတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့သူ့ မှာအားနည်းချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် Hosting မဟုတ်တဲ့အတွက် အခြားသော Third-Party Site များမှာ Download Link များလုပ်ထားရခြင်း(Mediafire တို့ လို့ …nl တို့ လို့ Site တွေမှာ) နောက်တစ်ခုက ကိုယ့် Download Link တွေက Pirate Copy နဲ့ ညှိနေရင်
(ရောင်းတဲ့ Software တွေကိုအခမဲ့ Download ဆွဲလို့ ရမယ့် Link တွေတင်မိရင်) သူတို့ ဘက်က Alert ပေးပြီးဖျက်ချတာတို့ … Download Link သေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကဲ…web site အလုပ်လုပ်ပုံလေးကို ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမှာပါ။
Operated Functions of Website
ဒါဆိုရင် Website တွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာအကြမ်းဖျင်းသိနိုင်လောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်။အဲဒီ Website တွေကိုကျွန်တော်တို့ က ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ Web Browser ဆိုတဲ့ Software နဲ့ သာကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ Microsoft ရဲ့ Windows Products တွေသုံးတယ်ဆိုရင် (Windows XP, windows7တို့ လို့ မျိုး windows OS တွေပေါ့) Internet Explorer ဆိုတဲ့ web Browser နဲ့Web surfing လုပ်နိုင်သလို အခြားသော Open Source ဖြစ်ပြီး Free ရတဲ့ Mozilla Firefox တို့ Google ရဲ့ Chrome တို့ လို Web Browser Software တွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ Website ကြည့်မယ့်ကျွန်တော်တို့ စက်တွေထဲမှာ Installed လုပ်ထားရပါမယ်။
Share From Thura Aung